News - Ke “price hikes” nke gara aga afọ abụọ, ọtụtụ ndị obere na ọkara-sized ……
Na "ọnụahịa ọnụahịa" nke afọ abụọ gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ obere na ọkara enwebeghị ike iguzogide nrụgide a ma jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ya n'ahịa. E jiri ya tụnyere nsogbu nke obere na ọkara na-eche ihu, nnukwu ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa ndị nwere teknụzụ nwere obere mmetụta. N'otu aka, n'ihi nnukwu mkpa maka akụrụngwa sitere na nnukwu ụlọ ọrụ, akụrụngwa nke nnukwu ụlọ ọrụ na-ejikarị ọdịnihu. Njirimara nke ahia n'ọdịnihu na-enyere ụlọ ọrụ buru ibu aka ịzụta ngwa ahịa nke ndị na-eweta ngwa ngwa na ọnwa ole na ole sochirinụ tupu ọnụahịa ahụ abawanye, nke na-ebelata mmetụta nke ịrị elu akụrụngwa akụrụngwa na ụlọ ọrụ. N'aka nke ọzọ, nnukwu ụlọ ọrụ na-adabere na teknụzụ dị elu na nrụpụta dị elu na-achịkwa ahịa dị n'etiti na-elu. Ọnụ ahịa agbakwunyere nke ngwaahịa dị elu, yana ike iguzogide ihe ize ndụ nke ịrị elu ahịa nke ihe ọkụkụ na-eme ka ọ sie ike karịa.
Tụkwasị na nke a, n'okpuru mmetụta nke asọmpi ahịa zuru oke na nrụgide gburugburu ebe obibi, ikike mmepụta azụ ji nwayọọ nwayọọ kpochapụ, nke kwalitekwara nkà na ụzụ nkwalite nke ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ alaghachila n'ụzọ ziri ezi, na òkè ahịa nke ụlọ ọrụ ndị isi. na ụlọ ọrụ amụbawo. N'ọdịnihu, na-aga n'ihu mma nke ahịa specialization, àgwà na larịị nke Jinjiang akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ yinye ga-eweta na mma ọnọdụ, mmepụta ga-aghọ ndị ọzọ ndọpụ, na ahịa ga-ọzọ mụ.
N'ezie, na mgbakwunye na ndị a teknụzụ ndị a na ahịa, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkà na ụzụ emeelarịrị arụpụta na ọgụgụ isi nke uwe. Dịka ọmụmaatụ, ụdị uwe ime akwa "Jiaoyi" na-agbanwe akwa uwe akwa site na nnukwu data na imepụta ọgụgụ isi iji nweta ntụgharị dị elu na obere ntụgharị. Ndepụta ego dị nso na efu. E guzobere Xindong Technology na 2018. Ihe nkenke ihe nkenke 3D dijitalụ ịme anwansị teknụzụ nke e kere na imekọ ihe ọnụ na China Textile Information Center na-enye ohere ka akwa na-erite uru na teknụzụ dijitalụ, na-enyere ụlọ ọrụ aka ngwa ngwa igosipụta ngosipụta ngwaahịa na efu na-efu tupu ahịa, ma belata akwa 50% nke nyocha na mmepe mmepe na 70% nke mmefu ahịa maka ndị na-emepụta ihe na ndị nwe akara emeela ka usoro nnyefe ahụ dị mkpụmkpụ site na
Mbupụ uwe dị ugbu a na ntanetị, nkwalite ahịa + oyi oyi na-enyere aka uwe
N'ịbụ ndị ọrịa ahụ metụtara na ọkara nke mbụ nke afọ, ihe karịrị 80% nke ego ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ jụrụ, nke metụtara ọrụ ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. Dabere na data sitere na Ministry of Industry and Information Technology, n'August, ọpụpụ uwe na-arị elu site na 3,23% kwa afọ, nke bụ oge mbụ na mmụba kwa ọnwa na-amaliteghachi mgbe ọnwa 7 nke uto na-adịghị mma n'afọ.
Na Septemba, mmemme 2020 National "Consummation Promotion Month" nke Mịnịstrị nke Azụmaahịa na Central Radio, Ihe Nkiri na Televisionlọ Ọrụ Telivishọn na ezumike "mmemme nke iri na otu" nwere nnukwu mmụba na ụlọ ọrụ akwa na akwa. Ihe na-esote "Eleven Eleven" na "Double 12 ″ mmemme nkwado ga-aga n'ihu na-abawanye oriri nke textiles na uwe. Tụkwasị na nke a, Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na China kwuru na October 5 na a na-atụ anya na ihe omume La Ni eventa ga-eme n'oge oyi a, nke na-ezo aka na mmiri oyi nke nwere anomaloussea elu okpomọkụ dị na etiti etiti na ọwụwa anyanwụ Pacific ma rute ogo ụfọdụ nke ike na oge. Ọnọdụ ihu igwe dị oke oyi n'oge oyi a emeela ka oriri uwe nke oge oyi.
Insole Board Na Eva, Agịga Punch Nonwoven Fabric, Akwụkwọ Insole Board Na Eva, Achọpụghị akwa na Eva, Nonwoven Fabric laminated na Eva ụfụfụ, Akpụkpọ ụkwụ Insole Material Sheet,